Ny Shark Black Xiaomi manaraka dia voamarina tamin'ny famoahana haingana 27-watt | Androidsis
Ny Black Shark ho avy an'i Xiaomi dia voamarina amin'ny famoahana haingana 27-watt
Xiaomi dia nanambara ny marika smartphone Black Shark tamin'ny taon-dasa tamin'ny voalohany tamin'ny maodely voalohany an'ity, izay mampiasa ny Qualcomm's Snapdragon 845 ary manana kalitao lalao. Hatramin'io fotoana io dia namoaka modely roa handimby ny orinasa ho an'ny lalao, izay ny Black Shark Helo y Black Shark 2. Izao indray no ho avy, toa izany.
Araka ny navoakan'ny angon-drakitra China Communication Agency, ny finday avo lenta an'ny marika manaraka dia ho tonga miaraka amin'ny haitao haingam-pandeha 27 watt. Manomana antsika amin'ny famoahana azy koa io.
Ny terminal dia nipoitra tao amin'ny rejisitra niaraka tamin'ny isa maodely «DLT-A0» ary efa nohamarinin'ny rafitra nankatoavina. Tsy nanambara zavatra firy ny taratasim-panorenany, fa nanambara izany kosa manohana ny famahanana haingana 27W (9V 3A, 12V 2.25A, 20V 1.35A). Amin'ny maha-zava-misy azy io, ny Black Shark 2 dia manohana fiampangana haingana 27 watt, toy izany koa Xiaomi Mi 9.
Telefaona Black Shark ankatoavina ankatoavina miaraka amina fiampangana haingana 27 watt
Tsy azontsika antoka hoe modely iza no ho avy, raha ny Black Shark 3 na karazana fanavaozana ny Black Shark 2, toy ny Black Shark Helo ho an'ny Black Shark tany am-boalohany. Mbola betsaka ny zavatra tsy fantatsika momba ity finday vaovao ity. Na izany aza, heverinay fa mety ho fanavaozana ny Black Shark 2 io.
Black Shark 2, famakafakana ary fitsapana ny fahombiazan'ny terminal terminal
Tsiahivina fa ny Black Shark 2 dia mampiasa efijery AMOLED 6.39 santimetatra miaraka amin'ny vahaolana FullHD + 2.340 x 1.080 teboka, SoC Snapdragon 855 avy amin'ny Qualcomm, Adreno 640 GPU, 6/8/12 GB RAM, 128/256 GB habaka fitehirizana anatiny, bateria 4,000 mAh, maodelin-tsary any aoriana misy fakan-tsary 12 MP roa ary fakan-tsary 20 megapixel ho an'ny selfie, antso an-tsary sy maro hafa. Avy amin'ireo fepetra voalaza ireo, afaka manantena zavatra tsara kokoa isika amin'ny smartphone manaraka.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » About us » Ny Black Shark ho avy an'i Xiaomi dia voamarina amin'ny famoahana haingana 27-watt
Ny varotra smartphone an'ny Huawei ao Taiwan dia nilatsaka ambany
Ny fisoratana anarana hafatra dia hanana sivana toy ny an'ny Snapchat